Inona no azontsika antenaina amin'ny Keynote an'i Apple? | Vaovao IPhone
Tao anatin'ny 24 ora mahery dia natomboka tao amin'ny WWDC 2015. ny fampisehoana Apple dia hampiharihary ny iOS sy OS X vaovao, ny vaovao momba ny HomeKit, Apple Pay, Apple Music, sns. Angamba hisy tsy ampoizina akory. Inona no azon'i Apple aseho antsika amin'ity lahateny ifotony WWDC ity? Lazainay aminao, voalahatra hatramin'ny ambony indrindra azo inoana.
1 iOS 9 ho an'ny iPhone, iPad ary iPod Touch
2 OS X 10.11 ho an'ny Mac
3 Apple Music, mozika ho an'ny rehetra
4 HomeKit, automatique an-tranonao
5 Apple Pay, fandoavam-bola amin'ny finday ary fiambenana
6 Apple Watch sy Watch OS
7 Apple TV, ilay lehibe tsy eo
8 Tsy maintsy miandry hatrany ny iPad Pro isika
9 Araho ny hetsika miaraka amin'i Actualidad iPad
iOS 9 ho an'ny iPhone, iPad ary iPod Touch
Ny WWDC tsy misy ny iOS dia toy ny paella tsy misy vary, zavatra tsy azo atao mihitsy. Ny rafi-piasana vaovao ho an'ny fitaovana finday avy any Apple dia tsy isalasalana fa ho iray amin'ireo mpandray anjara fototra ao amin'ny Keynote. Rafitra fiasa izay ahitàna ny fahamarinan-toerana, ny fahombiazany ary ny fanamboarana bibikely, raha ny tsiliantsofina rehetra, ireo lafiny ifotony. Rehefa afaka roa taona miaraka amin'ny fanovana kosmetika lehibe sy endrika vaovao, tonga ny fotoana hampihenana ary jereo kely indray mba hanitsiana izay tsy nety natao, na izay azo atao tsara kokoa. Ireo mpampiasa izay manana fitaovana taloha toa ny iPhone 4S na ny iPad 2 dia afaka mahita ny fitaovany indray miaraka amin'ny iOS 9 vaovao, nofinofy ho an'ny maro.
Saingy hisy ihany koa ny toerana ho an'ny vaovao: multitasking an-tserasera sy kaonty marobe ho an'ny iPad, na dia mety tsy ho tonga aza ireo fiasa vaovao ireo raha tsy amin'ny fampisehoana ny iPad Pro, izay horesahintsika avy eo. Ny fiasa vaovao mifandraika amin'ny Force Touch dia mety ho tonga ao amin'ny iOS 9 ihany koa, saingy ny fanoloran-kevitr'izy ireo dia mety hahemotra ihany koa mandra-pahitantsika ireo iPhones vaovao mampiditra an'io teknolojia vaovao io eo amin'ny efijery. Vaovao avy any Siri, Spotlight, Maps misy fampidirana bebe kokoa amin'ny fampiharana an'ny antoko fahatelo ary ilay "Rootless" honohono, rafitra fiarovana vaovao hisorohana (a priori) ny Jailbreak mihitsy izay hita ao amin'ity Keynote ity.
OS X 10.11 ho an'ny Mac
Havaozina koa ny rafi-piasan'ny solosaina Mac, na dia hiompana amin'ny fanatsarana ny fahombiazana sy ny fitoniana aza izany. Apple dia maniry ny "hiasa fotsiny" ny zavatra iray, zavatra izay "efa tsy niseho" nandritra ny fotoana ela ny OS X, na farafaharatsiny tsy mba toy ny taloha. Ny fahazoana fiasa toa ny AirDrop eo anelanelan'ny OS X sy ny iOS hiasa araka ny tokony ho izy dia tsy tokony ho fanamby ho an'ny Apple. Fanatsarana amin'ny mail, fampiharana izay manome antsika aretin'andoha bebe kokoa noho ny mahazatra, ary fanatsarana ny fampiasana ny fifandraisana RAM sy WiFi tokony ho tanjona voalohany amin'ny Apple hanatsarana ny fahombiazan'ny rafitrao, indrindra amin'ny solosaina taloha.
Ny làlana mankany amin'ny fidirana amin'ny iOS dia nanomboka dikan-maro lasa izay, miaraka amin'ny Continuity, Handoff, iCloud Drive, sns. Mety hiseho fisehoan-javatra vaovao izay maneho fandrosoana vaovao mankany amin'ilay fampidirana tanteraka, fa tsy hisy zavatra mitovy amin'ny efa hitantsika tamin'ny Windows 10Apple dia mbola tsy manana izany fampitambarana izany amin'ny drafiny, farafaharatsiny amin'ny ho avy tsy ho ela. Siri dia antenaina ihany koa fa ho tonga amin'ny solosaina Apple.
Apple Music, mozika ho an'ny rehetra
Ilay serivisy mozika streaming vaovao koa dia ho kintana fampisehoana rahampitso. Apple Music dia hanambatra ny Beats Music sy ny iTunes Radio. Ny voalohany dia fomba fandoavam-bola miaraka amin'ny vidiny $ 10 isam-bolana ary telo volana fitsarana maimaimpoana. Ny faharoa dia ny kinova maimaim-poana saingy tsy voafehinao loatra ny zavatra henoinao sy ny tolo-kevitr'ireo DJ lehibe. Rafitra streaming mozika vaovao izay hifaninana mivantana amin'ny Spotify, ny benchmark lehibe, ary mikendry ny hanokatra fomba vaovao hitrandrahana ny fanatsarana an'i Apple amin'ny mozika niomerika, ankehitriny satria tsy mandeha amin'ny fotoana tsara indrindra ny fivarotana azy.
HomeKit, automatique an-tranonao
Ny kojakoja voalohany mifanaraka amin'ny HomeKit dia efa niseho, fa manantena izahay fa mbola hisy bebe kokoa amin'ny fampisehoana ny Apple. Ny fantsom-pahamando sy ny maripana, ny fakantsary, ny jiro ary ny varavarana mandeha ho azy dia tsara daholo ho fanombohana, saingy ny HomeKit dia mila mandeha lavitra kokoa. Miaraka amin'ny Apple TV ho ivon-toeran'ny fanaraha-maso sy Siri ho toy ny fomba fifanakalozana, HomeKit dia tokony hamela antsika hibaiko tanteraka ireo fitaovantsika mifandray, na dia ivelan'ny trano aza. Herintaona izay no nanombohan'i Apple azy ary saika tsy nisy na inona na inona nitranga nanomboka tamin'izay. Ny fahatarana (heverina) ny Apple TV vaovao dia mety hampihemotra ny vaovao mahaliana indrindra mandra-pahatongan'ny famelabelarana vaovao iray avy eo.
Apple Pay, fandoavam-bola amin'ny finday ary fiambenana
Ny rafitra fandoavam-bola finday an'i Apple dia nanova ny tsena… any Etazonia. Andrasana fatratra ny fanitarana an'izao tontolo izao, ary ny tompona iPhone 6, 6 Plus sy Apple Watch dia manantena ny hampiasa ny Apple Pay ho an'ny fividianany. Ny terminal maro any amin'ny magazay Espaniôla dia mihoatra noho ny namboarina tamin'ny rafitra vaovao, fa mandra-pahatongan'ny fifanarahana amin'ireo orinasa ara-bola sy mpamoaka karatra tsy azo ampiasaina ivelan'ny Etazonia izany. Amin'izao fotoana izao, ny tsaho dia manondro fotsiny ny mety hahatongavan'i Apple Pay any Royaume-Uni, saingy firenena maro no mety ho tafiditra ao anatin'io lisitra io.
Apple Watch sy Watch OS
Tsy hisy vaovao lehibe ao amin'ny Apple Watch, fitaovana iray izay vao navoaka ary mbola tsy misy manerantany. Ny hany zavatra andrasana dia ny filazan'ny Apple fa manomboka amin'ny volana oktobra dia afaka manomboka izy ireo mamolavola fampiharana manokana ho an'ny Apple Watch, noho izany dia mijanona tsy miankina betsaka amin'ny iPhone sy manatsara ny hafainganan'ny fampidinana. Misy ny tsimbadika vaovao ho an'ny Watch OS izay manitsy ny bibikely, manatsara ny fiasa iray na mamela fanaingoana bebe kokoa.
Apple TV, ilay lehibe tsy eo
Ny Apple TV dia tsy isalasalana fa izy no tsy tonga voalohany na gaga be. Rehefa afaka volana maromaro niresaka momba ilay kinova vaovao an'ny Apple's Set-Top-Box, dia toa tsy mandritra ny volana vitsivitsy izany rehefa hanolotra azy amintsika. Apple TV nohavaozina, mety hametrahana rindranasa, Siri namboarina ary ny serivisy fahitalavitra Internet nandrasana hatry ny ela an'i Apple dia ho fitaovana izay antenain'ny ankamaroantsika hanana toerana ambony ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny. Mampalahelo fa ny zava-drehetra dia toa manondro fa tsy ho tonga izy io hatramin'ny oktobra, izay mety hisy fiatraikany amin'ny fanambarana HomeKit ihany koa.
Tsy maintsy miandry hatrany ny iPad Pro isika
Mampalahelo fa tsy hifarana ny tsaho momba ny iPad Pro, satria amin'ity Keynote ity dia azo inoana fa tsy ho hitantsika ilay takelaka Apple vaovao, afa-tsy ny fahagaga ao an-drenivohitra. Takelaka lehibe kokoa, misy mpandahateny efatra, fampisehoana Force Touch, mpampiasa marobe, multitasking marobe eo amin'ny efijery Ary ny hery iray izay tsy hialona ny an'ny solosaina finday mahazatra dia mety ho ilay fitaovana ilain'i Apple hiditra tanteraka amin'ny sehatry ny matihanina ary hamerenana amin'ny laoniny ny fivarotana iPad. Saingy aorian'ny fahavaratra dia mety hisy 99%.
Araho ny hetsika miaraka amin'i Actualidad iPad
Vonona ny zava-drehetra ary afaka manaraka azy mivantana amin'ny iPad News ianao. Nandritra ny famelabelaran'i Apple afaka jerenao amin'ny Twitter daholo ny fampahalalana rehetra (@act_ipad) ary amin'ny bilaogy, miaraka amin'ireo lahatsoratra izay hanomezanay anao ny fampahalalana rehetra miaraka amin'ny sary. Taty aoriana dia hanana ny antsika koa isika podcast mivantana ahafahanao mandray anjara amin'ny chat ampidiriny, ary raha tsy afaka miaina ianao dia afaka mihaino azy ny ampitso maraina. Miandry anao izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 9 » Inona no azontsika antenaina amin'ny Keynote an'i Apple?
Mangataha fangatahana tsy misy doka noho ny IGN. Atorinay anao ny fomba ahazoana azy
Daty famoahana IPhone 6S araka ny voalazan'ny Vodafone